Isingeniso sezinye zezintambo zezimoto - iConnexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Isingeniso samanye amakhebuli ezimoto
Ikhebula lemotoihlukile kunomndeni ojwayelekileizintambo.
Izintambo ezijwayelekile zasendlini ziyizintambo ze-single-core ezinezinga elithile lobulukhuni. Izintambo zezimoto zonke ziyizintambo eziguquguqukayo zethusi eziningi. Izintambo eziningana noma eziningi zensimbi eziguqukayo zisongwe ngepayipi lokuvikela (PVC), elithambile futhi okungelula ukugqashuka. Ngenxa yokukhethekile kwemboni yezimoto, inqubo yokukhiqiza yocingo lwezimoto nayo ibaluleke kakhulu kunezinye izintambo ezijwayelekile. Kunezinhlobo ezimbili zezintambo zezimoto: izintambo ezinamandla amakhulu kanye nezintambo ezinamandla amancane, zombili ezicutshungulwa ngezintambo eziguquguqukayo zethusi ezinemigqa ehlukahlukene. Indawo enqamulelayo yocingo ikhethwe ngokuya ngokusebenza kwayo njengamanje. Okokusebenza kagesi okukhiqiza imisinga emincane kakhulu, ukuze kuqinisekiswe ukuthi izintambo kufanele zibe namandla athile womshini, indawo enqamulelayo yezintambo akufanele ibe ngaphansi kuka-0.5mm2. Njengoba i-starter isebenza isikhathi esifushane, ukuze kuqinisekiswe ukuthi i-starter ingakhipha amandla anele uma isebenza ngokujwayelekile, ukwehla kwamandla kagesi okwenziwe yi-100A yamanje kulayini akumele kudlule u-0.1v-0.15v. Ngakho-ke, indawo enqamulelayo yocingo olusetshenzisiwe inkulu kakhulu. Intambo yamandla aphezulu emoto inamandla amakhulu kakhulu okumelana nemoto, okufanele ngokuvamile abe ngaphezu kwe-15kv, ngakho-ke indawo enqamulelayo incane (ngenxa yamanje amancane), cishe u-1.5mm2, futhi ubukhulu besendlalelo sokuvikela bukhulu phansi. Ukotini Varnished isikhwama nokwelukiweyo.
Izinhlobo zemoto ezisetshenziswa kakhulu yilezi: i-QVR-105 kazwelonke ejwayelekile, i-AV ejwayelekile yaseJapan, i-AVS, i-AVSS, i-AVX / i-AEX, iJalimane ejwayelekile iFRY-B, iFRY-A, iFRYK-A, iFRYK-B, iFRYW-A, iFRYY-B, I-US Standard GTE, GPT, GXL, SXL, TWE, TWP, TXL.
Umgomo wokukhetha wocingo lwezimoto unqunywa ngokwezinga lokufakwa kocingo, ukudlula kwamanje namandla adingekayo womshini. Imishini kagesi esebenza isikhathi eside ingakhetha izintambo ezinamandla okuthwala angama-60%; imishini kagesi esebenza isikhathi esifushane ingakhetha izintambo ezinamandla wangempela wokuthwala we-60% kuye ku-100%. Isistimu kagesi yezimoto ingekagesi ophansi, onamandla amakhulu asebenzayo manje kanye nelahleko enkulu yamandla kagesi. Ukwehla kwamandla kagesi ngokweqile kuzothinta ukusebenza okujwayelekile kwemishini kagesi. Ngakho-ke, lapho wenza isigaba esiphambene nocingo nokukhethwa, qinisekisa ukuthi ukulahleka kwamandla kagesi akudluli inani elithile: uhlelo lwe-12V aludluli ku-0.5V, uhlelo lwe-24V aludluli ku-1.0V. Isikhathi samanje esisebenza ngocingo asivunyelwe ukuba sikhulu kunomthamo wamanje ophethe wocingo. (i-Internet)
Xhumana nathi nge-OEM ODM nganoma yiluphi uhlobo lweIkhebula lemoto